श्रीमती पोइला गएको सहन ..नसकेर…! « गोर्खाली खबर डटकम
श्रीमती पोइला गएको सहन ..नसकेर…!
श्रीमती पोइल गएको सहन गर्न नसकेर एक युवकले श्रीमतीको नयाँ श्रीमानको गोप्य अंग का’टि’दिएका छन् । अनि आफुले पनि नदिमा हाम फालेका छन् । आफुले माया गरेकी श्रीमतीले धो’का दिएर अर्कैसंग गएपछि उनले यस्तो गरेका हुन् । श्रीमती कहाँ जान्छिन् भनेर पत्ता लगाउन उनले उनको कारमा जिपिएस लगाएका थिए । त्यसैवाट उनले पत्नीको सबै कृयाकलाप निगरानी गरेका थिए ।
त्यस पछि आफु पनि नदिमा हाम फाले । उनको पनि निधन भएको छ । घटना पछि प्रहरीले उनको खोजि गरेको भएपनि पत्ता लगाउन सकेन । पछि नदिमा उनको शव फेला परेको थियो । स्पानइआर्ड कार्लोस सन्डे फिडल्गो नाम गरेको ति पुरुषको शव प्रहरीले फेला पारेको जनाएको छ ।
श्रीमतीका नयाँ श्रीमान प्रेमी लुइस मिगुइलको पनि तत्काल निधन भएको थियो । उनले आफ्नो श्रीमतीलाई भने बाँ’धेर राखेका थिए । श्रमतीले घटना देख्न पाइनन् । श्रीमान गइसकेपछि उनले बाँ’धेको डोरी खोल्न सफल भएकी थिइन् । उनले प्रहरीमा उजुरी दिँदा सम्म दुवै जनाको निधन भइसकेको थियो । महिलाका पूर्व श्रीमान पेशाले ब्यापारी थिए र आफ्नी पुर्व पत्नीको नयाँ सम्बन्धलाई लिएर खुसी थिएन ।